cellulose အီ, PP Fiber, သံမဏိ Fiber, ကယ်လ်ဆီယမ် format - Michem
Polycarboxylate အခြေပြု Superplasticizer Powder
Polycarboxylate Superplasticizer မိခင်အဖျော်ယမကာ
အဆိုပါ core ကိုထုတ်ကုန် cellulose အီ (HPMC, HEMC, HEC), polypropylene (PP) Fiber, Redispersible Powder, Superplasticizer စသည်တို့ကိုဖုံးအုပ်ထားပါသည်
Michem နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှု MC များ၏ 5,000MT (HPMC / MHEC) ၏စွမ်းရည်မြှင့်ပေါင်း HEC ၏ 2000 MT နှင့်အတူရှန်ဒေါင်း, တရုတ်အတွက် cellulose ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းရှိပါတယ်။
အနာဂတျမှာပိုပြီးအခွင့်အလမ်းနှင့်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရ, Michem တကမ္ဘာလုံးဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့တရုတ်အရင်းအမြစ်အားသာချက်ပေါင်းစပ်, တစ်ဦးထက်ပိုသောဆန်းသစ်ခြင်းနှင့်လက်တွေ့သဘောထားကိုနှင့်အတူ unremitting အားထုတ်မှုစေမည်။
19-04-19 / ဖြင့် admin
Redispersible Powder Market က
Redispersible Powder Market ကလျှောက်လွှာ (Tile, ကြမ်းခင်း, ပြုပြင်ခြင်း, Gypsum အင်္ဂတေ, ရေစိုခံ, ETICs) ဖြင့် Redispersible မှုန်ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ဖိအား, ရေမှုန်ရေမွှားခြောက်သွေ့အဖြစ်ဖြစ်စဉ်များတစ်စီးရီးများကအမှုန့် thermoplastic ဗဓေလသစ်ပစ္စည်းများအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ကြပြီပေါ်လီမာ emulsions ရှိပါတယ် ...
19-03-21 / ဖြင့် admin
နှစ်မျိုး HPMC အကြားခြားနားချက်
ပစ္စုပ္ပန်မှာ, hydroxypropyl methylcellulose အဓိကအားနှေး-ကပ်သီးကပ်သတ် type ကို (လည်းပူပြင်းတဲ့-ဖျက်သိမ်းအမျိုးအစားကိုခေါ်) နှင့်ပြည်တွင်းစျေးကွက်အတွက်အစာရှောင်ခြင်း-ကပ်သီးကပ်သတ်အမျိုးအစားသို့ခွဲခြားထားပါသည်။ အဆိုပါအနှေးကပ်သီးကပ်သတ် type ကိုအသုံးအများဆုံးနဲ့မကြာခဏအသုံးပြုကြသည် cellulose အီဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ခေတ္တဇာတ်ကောင်မိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ် ...
19-03-20 / ဖြင့် admin
အစာရှောင်ခြင်းကပ်သီးကပ်သတ် (Surface ကကုသ) HPMC တစ်ဦး ...
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူနောက်ခံ technique ကို, အစာရှောင်ခြင်းဖျက်သိမ်းရေး HPMC အသုံးများဖြစ်ပြီး, နှစ်စဉ်ဝယ်လိုအားတိုးမြှင့်ထားသည်။ ဒါဟာဓာတ်ဆီအတွက်, etc အေးဂျင့်, ရုပ်ရှင်ဖွဲ့စည်းအေးဂျင့်, ရေထိန်းအေးဂျင့်, sizing တစ်ဦး emulsifier, thickened, စွန့်ကြဲ, stabilizer အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ...
တိကျမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော HPMC ထဲမှာပါတဲ့ data တွေကိုရယူနိုင်ရန်အတွက်, သင်အနည်းငယ်အချက်များကိုအာရုံစိုက်ရမယ်: ပထမ, တူရိယာများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းအမျိုးသား metrological စစ်ဆေးရေးစည်းမျဉ်းများ၏လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းရပါမည်။ In-service ကတူရိယာအခါအားလျော်စွာစစ်ဆေးအတည်ပြုရပါမည်။ အကယ်. ...
HPMC Tgel ၏ထောက်လှမ်းနည်းလမ်း
1. လျှောက်လွှာပစ္စည်းကိရိယာများ: အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဖြစ်ထောက်လှမ်းနည်းလမ်း CJJ8-1 သံလိုက်အပူ stirrer, သံလိုက်လှံတံ, beaker, ဖန်လှံတံ, တိကျသာမိုမီတာ 2. ပစ္စည်းများနှင့်ဓါတ်ကူပစ္စည်း: HPMC (Hydroxypropyl methylcellulose) နမူနာ, သန့်ရေ 3. စစ်ဆင်ရေးခြေလှမ်းများ: 3.1 ယူရ HPMC နမူနာ၏ 0.1 ဂရမ်ပြုလုပ်ထားပါ ...
Gypsum နှောင့်နှေး (MC-7011)
polypropylene (PP) Fiber -Monofilament Form ကို
Polycarboxylate အခြေပြု Superplasticizer (MC-5021 ...
No.277 Gongye N ကိုလမ်း, Licheng, Jinan ရှန်ဒေါင်း။
Skype ကို: လင်ဒါ
သိကောင်းစရာများ, Featured ထုတ်ကုန်များ , မြေပုံအညွှန်း , မိုဘိုင်းဆိုက်ကို
Polycarboxylic အက်ဆစ် Superplasticizer , Polycarboxylate Ether Msds, Gypsum အင်္ဂတေသည်နှောင့်နှေး, Additive To Mortar And Plaster, Hydroxypropyl methyl Cellulose, Superplasticizer , အားလုံးထုတ်ကုန်များ